ယဉ်လိုင်းပေါင်းစုံမှ ယဉ်မောင်း၊ ယဉ်နောက်လိုက်နဲ့ လုပ်သားအားလုံးကို တတိယအကြိမ်ဆန်၊ ဆီထောက်ပံ့ - Kantarawaddy Times
အဝေးပြေးကားဂိတ်မှ ယဥ်မောင်းများ. ယဥ်နောက်လိုက်များ. လုပ်သားများက ဆန်.ဆီတွေလာရောက်သယ်ဆောင်စဥ်
ကိုဗစ်ကာလာအတွင်းမှာ ကားဂိတ်တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ယဉ်မောင်း၊ ယဉ်နောက်လိုက်၊ လုပ်သားတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် တတိယအကြိမ် ဆန်၊ ဆီ ထပ်မံထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလ ဒီထက်ကြာမယ်ဆိုရင်လဲ ထပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးစံအေးကပြောပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ယဉ်မောင်း၊ ယဉ်နောက်လိုက်တွေကလဲ ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသာ ဦးတည်လုပ်နေတာလေး။ ဒီလုပ်ငန်းမလုပ်တဲ့ခါကျတော့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျနော်တို့ကော်မတီတွေက ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ ဒါပေးသင့်တယ်။ ဒီထပ်ကြာရင်လဲ ထပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်လဲ ကျနော်တို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်။” လို့ ဦးစံအေးက ပြောပါတယ်။
၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ယဉ်မောင်း၊ ယဉ်နောက်လိုက် နဲ့ လုပ်သားတွေကို ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်း ၁၀၇သိန်းဖြင့် ဆန်၊ဆီတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးစီကို ဆန် ၁၂ပြည်နဲ့ ဆီ ၁ပိသာ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလုပ်တွေကပိတ်ထားလို့ ကား မထွက်ရတဲ့အတွက်အားလုံးခက်နေကြပေမယ့်လည်း အစိုးရကချမှတ်ထားတာဆိုတော့ ဒီတိုင်းပဲ နေလိုက်ရတယ်လို့ ရွှေလွန်းပျံ လွိုင်ကော်- ကျောက်ပန်းတောင်- မြင်းခြံ- နေပြည်တော်ကားမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုကျော်ခိုင်ကပြောပါတယ်။
“ ယဉ်မောင်းတွေ၊ ယဉ်နောက်လိုက်တွေကတော့ ကိုက ကားမထွက်ရတော့ ပိုင်ရှင်တွေကစပေါ့နော် ခက်ခဲကြတာပေါ့ ဒါကတော့။ ဒီအလုပ်ပဲလုပ်စားတတ်တာရော။ ဒီအလုပ်တွေကပိတ်ထားတော့၊ အစိုးရက ချမှတ်တဲ့စည်းကမ်းဆိုတော့လဲ ဖောက်ဖျက်လို့မရဘူးလေနော်။ ခက်ခဲပေမယ့်လို့ ဒီတိုင်းပဲနေရတာပေါ့။” လို့ ကိုကျော်ခိုင်က ပြောပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်အတွင်းက အဝေးပြေးကားဂိတ်တွေကို ယဉ်သွားလာမှုရပ်နားဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့လ ၁၂ရက်နေ့မှာ ပြည်နယ်အစိုးရမှ စာထွက်ပြီး ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အထိဆိုရင် ကားဂိတ်တွေကနေ ကားတွေပြေးဆွဲမှု ရပ်နားထားတာဟာ ၁လကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ယဉ်လိုင်းတွေကိုပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့ လမ်းညွှန်မှုပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့
“ ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့ ဒီဖွင့်တယ်၊ ပိတ်တယ်ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ ကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့ မရှိဘူးပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကားတွေကို ကျနော်တို့လေ လမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့နေကနေစပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဆွဲပေးမယ်။ သူ လမ်းညွှန်မှုမပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့ရပ်ထား ရမယ်လေး။” လို့ ဦးစံအေးက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၈-၁၉ခုနှစ်မှာ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးယဉ်လိုင်းအသင်းရဲ့ ကော်မတီရံပုံငွေ စုစုပေါင်း သိန်း၁၈၀ခန့်ပဲ ရှိတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း သိန်း၇၄၀ရရှိနေပြီလို့ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးယဉ်လိုင်းအသင်းမှ သိရပါတယ်။
အဝေးပြေးကားဂိတ်မှာရှိတဲ့ ယဉ်လိုင်းပေါင်းစုံမှ အိမ်ထောင်စု ၇၀၀လောက်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ဆိုရင် လူဦးရေ ၃၀၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဦးစံအေးကဆိုပါတယ်။ ယခုလိုထောက်ပံ့တာဟာ ယနေ့ အထိဆိုရင် တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Previous articleဒေါဆိုရှေ့မြေယာအမှုကို ပလပ် လိုက်ပေမယ့် တောင်သူတွေ မြေယာပြန်လည်ရရှိဖို့ လိုလားနေကြ
Next articleရန်ကုန်တိုင်းရှိ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာမှာကူညီပေးဖို့ သူနာပြု ၂၁ ဦးထပ်မံထွက်ခွာ